China Ntụ ọka Bgwakọta Ngwaahịa na orylọ Ọrụ | Obodo Chinatown
Nke mbụ, a na-eziga ụdị dị iche na akara ntụ ọka dị iche iche emere n'ime ime igwe ahụ na bins ebe nchekwa dị iche iche site na ibute ngwa maka nchekwa. A na-akpọ ntụ ọka ndị a ntụ ọka. Tupu ntụ ntụ na-abanye n'ụlọ nkwakọba ihe, ọ ga-agabiga usoro nyocha ntụ ọka, metering, nkewa magnet, na ụmụ ahụhụ. Mgbe agwakọtara ntụ ọka, a na-ewepụta ntụ ọka dị iche iche dị iche iche dị mkpa iji dakọtara na bini, gwakọta ọnụ dịka ọnụọgụ ụfọdụ, a na-agbakwunye mgbakwunye dị iche iche dị ka achọrọ, a na-eme ntụ ọka gwụchara mgbe ọ kpachachara ma gwakọta. Dabere na iche iche dị iche iche nke ntụ ọka bụ isi, oke dị iche iche nke ntụ ọka dị iche iche, na mgbakwunye dị iche iche, akara akara dị iche iche ma ọ bụ ụdị ntụ ọka pụrụ iche nwere ike agwakọta ma ghọta.
Ntụpo agwakọta agwakọta
Wayzọ Valzọ Abụọ
Low Pressure Jet Myọcha
Ntụ ọka ogbe ntụ ọka
Iji ntụ ọka agwakọta (ụlọ ọrụ nhazi nri)
Nke a na usoro-agụnye pneumatic erute na nchekwa nke nnukwu ntụ ntụ, ton ntụ ntụ na obere ngwugwu ntụ ntụ. Ọ adopts PLC + ihuenyo mmetụ na-aghọta akpaka erikpu na ntụ ntụ nkesa, na mmiri ma ọ bụ griiz nwere ike kwukwara ya, nke na-ebelata ọrụ na izere ájá mmetọ.
Ntụ ọka lendgwakọta Ikpo
Workshoplọ ọrụ na-agwakọta ntụ ọka nke ntụ ọka na-agwakọta ntụ ọka ahụ na bins ntụ ọka dị iche iche iji hụ na nkwụsi ike nke ngwaahịa ikpeazụ.
Workshoplọ ọrụ na-agwakọta ntụ ọka nke ntụ ọka na-agwakọta ụdị ntụ ọka dị iche iche iji mepụta ụdị ntụ ọka dị iche iche, dị ka ntụ ọka dumpling, ntụ ọka noodle, na ntụ ọka.
Mmeputa ulo akwukwo nke noodle factory adopts ihe nile-igwe anaghị agba nchara ntụ ntụ biini na batching ọnụ ọgụgụ. A na-ebugharị ntụ ọka ahụ na nnukwu ntụ ntụ n'ọtụtụ batching maka oke nha, nke na-azọpụta usoro nke ịtọpụ akwụkwọ ntuziaka ma zere ọnọdụ ndị ọrụ na-agbakwunye ntụ ọka na-ezighi ezi.
Na ntụ ọka agwakọta ntụ ọka nke ụlọ ọrụ noodle, a na-agbakwunye ọtụtụ ihe oriri na ntụ ọka iji mepụta ụdị noodles dị iche iche.
Workshoplọ ọrụ na-agwakọta ntụ ọka ntụ ọka nke ụlọ ọrụ bisikiiti na-agbakwunye ọtụtụ ihe na ntụ ọka n'ọtụtụ. Ọ bụ nke igwe anaghị agba nchara ka ọ bụ ọfụma na-eri nri.
N'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ụlọ ọrụ bisikiiti, ntụ ọka ahụ ga-abanye igwekota mgwakota agwa maka ịgwakọta mgbe e nyochachara ya ma gwakọta ya.
Osote: MLT Usoro Degerminator